Sheekh Barbaraawi oo ka Digay Halista Hadallada Fidmo-abuurka ah | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Sheekh Barbaraawi oo ka Digay Halista Hadallada Fidmo-abuurka ah
Hargeysa (ANN)- Sheekh Cabdillaahi Xasan Xaashi (Barbaraawi) oo ka mid ah culimada waaweyn ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa si adag uga digay halista if iyo aakhiraba lagala kulmi karo ee ka dhalata hadallada fidmo-abuurka ah ee laga dhex faafiyo ummadaha.
Ø Waa in la iska ilaaliyo ficil kasta oo sababi kara
o Khalkhalka iyo
Ø Waa in aynu ka digtoonaanno macsiyada,” ayuu yidhi Sheekh Barbaraawi.
Sheekh Barbaraawi, ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha macsida ah bataan maalmaha lagu jiro ololayaasha doorashooyinka, waxaannu yidhi; “Waanad ogsoon tihiin oo maalmahan doorashadu soo dhawaatay macsiyadu aad bay u fara badan tahay, waxaanad moodaa dad fara badan inuu Shaydaanku ka dhaadhiciyey; ‘Doorashadaba in aan la geli karin haddii aan Ilaahay la caasiyin .’ Bal in aan waxba la dooran karin, horta ilaa la waasho oo maryaha lana dhigto.
“Arrin kale ee inala gudboon waxa uu yahay dhammaanteedba waa in aynu isku kaashanno maamul iyo shacab, rag iyo dumar, yar-yar iyo waaweynba, nimcada amniga ah ee Alle (SWT) ina siiyey inaynu ilaashanno. Iskaashigaasi waxyaabaha uu ku suurtoobayo waxa ka mid ah;
• In wanaagga la is-faro, haddii laga tago Ilaahay uu nabadgelyo-darro innagu ciqaabayo.
• In xummaanta la iska reebo, qof weliba xumaanta uu garanayo, inay sharciga Ilaahay khilaafsan tahay oo uu yidhaahdo; ‘Waar Alle ka baqda oo xummaantaasi joojiya.’
• In dadku gacan qudha noqdaan, oo meel qudha uga soo wada jeedaan cidda nabadgelyada khalkhalka gelinaysa ee doonaysa inay dhulka fasahaad ka samayso. Qofna waa in aannu qarin ama ka aamusin, cid uu hubo amaseba ay ula badan tahay dadka Muslimiinta ah inay dhiiggooda daadinayaan ama inay khalkhal iyo nabadgelyo-darro abuurayaan.